Inkaartii Anfield Oo Dhamaatay, Rikoodhadii La Diiwaangeliyey, Xiddigii Garoonka Iyo Qiimaynta Ciyaartii Liverpool Ku Garaacday Aston Villa - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaInkaartii Anfield Oo Dhamaatay, Rikoodhadii La Diiwaangeliyey, Xiddigii Garoonka Iyo Qiimaynta Ciyaartii Liverpool Ku Garaacday Aston Villa
Inkaartii Anfield Oo Dhamaatay, Rikoodhadii La Diiwaangeliyey, Xiddigii Garoonka Iyo Qiimaynta Ciyaartii Liverpool Ku Garaacday Aston Villa
Gool uu waqtigii dhimashada u dhaliyey Alexander-Arnold ayaa kala saaray Liverpool iyo Aston Villa oo ku dhowaa in ay barbarro ku dhamaystaan ciyaarta, waxaana goolkani uu Reds u go’aamiyey in saddexda dhibcood ay ku qaadato garoonkeeda Anfield.
Guushani waxay Liverpool keentay kaalinta afraad ee horyaalka oo ay ku jiri doonaan illaa inta ay guulo soo gaadhayaan Chelsea, Tottenham ama West Ham, iyadoo midda dambe ay xataa ku dhaafi karayso barbarro ay keento.
Liverpool ayaa gool ay dhalisay daqiiqaddii 90aad ku badisay 37 ciyaarood oo horyaalka Premier League ah, waxaanay 12 jeer ka badan tahay kooxda kusoo xigta ee saddexda dhibcood ku hesha gool ay waqtigaas oo kale dhashatay.
Aston Villa ayaa 22 jeer lagaga badiyey goolal laga dhaliyey daqiiqaddii 90aad ama kaddib, waxaana kaliya ka badan Tottenham oo 23 ciyaarood waqtigan oo kale lagu dilay, saddexda dhibcoodna lagaga qaatay. Kama dhicin horyaalka laba kooxood oo guul-darrooyinka ugu badan ee Premier League loogu geystay goolal dhashay waqtigaas.
Liverpool ayaa soo afjartay siddeed ciyaarood oo garoonkeeda aanay wax guul ah ku helin oo dhamaantood horyaalka Premier League ahaa. Lix ka mid ah ciyaarahaas ayaa laga badiyey, labada kalena barbarro ayay keeneen.
Goolka barbarraha Mohamed Salah uu dhaliyey ayaa soo afjaray 12 saacadood iyo 44 daqiiqadood oo aanay Liverpool wax gool ah ku dhalinin garoonkeeda Anfield kulamo ka tirsanaa horyaalka Premier League.
Mohamed Salah ayaa dhaliyey goolkiisii 28aad ee dhamaan tartamada ee xilli ciyaareedkan, waana xilli ciyaareedkiisii labaad ee uu ugu fiican yahay dhinaca goolasha. Xilli ciyaareedkii 2017/18 ayuu dhaliyey 44 gool.
Weeraryahanka Aston Villa ee Ollie Watkins ayaa noqday laacibkii ugu horreeyey ee afar gool oo horyaalka ah sannad gudihii ka dhaliya Liverpool, waxaanu soo qabtay Andrey Arshavin oo xilli ciyaareedkii 2008-09 afar gool ka dhaliyey. Ma dhicin muddadii u dhaxaysay in afar gool uu hal ciyaartoy ka dhaliyo isku-darka labada lugood ee horyaalka.
Trent Alexander-Arnold ayaa goolkiisii ugu horreeyey ee Premier League ah ku dhaliyey Anfield tan iyo July 2020, waxaanu goolkaas ka dhaliyey waqtigaas Chelsea.
Mohamed Salah oo goolka koowaad dhaliyey, fursado badan oo dahabi ahaana helay inkasta oo aanu dhalinin ayaa ahaa laacibka ugu cadcaddaa garoonka, waxaana loo caleemo saaray xiddigii garoonka.
Ciyaartoyda Liverpool ayay qiimayntoodu fiicnayd marka laga reebo labada difaac dhexe ee Nat Phillips iyo Ozan Kabak oo min 6 ka helay qiimaynta kulanka.
Aston Villa ayaa sidoo kale ay ciyaartoygeedu qiimayn fiican oo min 7 ah heleen, waxaase liitay difaacyadeeda Mings, Targett iyo Luis oo iyagana ay isku mid ahaayeen difaacyada Liverpool.
Beddelka: Thiago (6), Mane (6), Shaqiri (n/a).
Beddelka: Barkley (6), El Ghazi (6), Ramsey (n/a).